Maxaa Sababo Xinjirow La’aanta Dhiigga (Hemophilia)? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Xinjirow la’aanta dhiigga waxa uu kamid yahay cuduradda naadirka ah ee ku dhaco dhiigga. Waxa uuna sababaa cudurkaan qofka oo dhiig-baxo marka uu dhawaac gaaro.
Cuduradda dadka ku dhaco sida caadiga ah waxaa loo qeybiyaa labbo qeybood oo kale ah:
1-Cudur uu qofka ku dhashay waxaana afka qalaad loo yaqaano(Congenital).
2- Cudur ku dhaco qofka marka uu dhasho ka dib waxaana afka qalaad loo yaqaana ( Acquired).
Xinjirow la’aanta dhiigga waa cudur lagu dhasho inta badan ,waxa ayna ka imaadaa badanaa yaraanshaha boratiinka uu u bahan yahay sameynta xinjirowga dhiigga.
Calaamadaha Lagu Garto Qofka Qabo Xinjirow La’aanta Dhiigga Waxaa Kamid Ah:
Canugga oo lagu arko dhiigg-bax aan caadi aheyn, qaaddashada talaalka ka dib(Unusual bleeding after vaccinations).
Qofka oo ka dareemo xanuun iyo barar kale-goysyada.
Kaadida iyo saxarada qofka oo ay soo racdo dhiigg.
Qofka oo lagu arko sanka oo dhiigg ka imaado sabab la’aan.
Maxaa Sababo Xinjirow La’aanta Dhiigga?
Xinjirow la’aanta dhiigga ee qofka ku dhacdo marka uu dhasho ka dib, waa xaalad dhif iyo naadir ah, waxa aana lagu arkaa xinjirowga dhiigga marka ay soo weeraan unugyadda difaaca ee qofkas,waxa ayna la xariirtaa xaaladahaan:
Xaalad uu jirka isaga is weeraro (Autoimmune conditions).
Tags: Maxaa Sababo Xinjirow La’aanta Dhiigga (Hemophilia)?
Next post Maxay Tahay Sababta Mooskan Loogu iibsaday $120,000 oo dollar?
Previous post Maxaad ka Taqanaa Mashiinka Shucaaca (Ultrasound)?
Baarayaasha Maskaxda: “Daawashada Filimada Xun (porn) Waxay Xannibayaan Horumarka Maskaxda” 180.17 views per day | by Afrikaan.so